China CCTV qapha PX220WE ifektri abakhiqizi | Isibonisi Esiphelele
Ukuqapha kwe-CCTV PX220WE
Lesi siqaphi sombala esikhanyayo esibanzi se-LED 21.5 ”sinikeza okokufaka kwe-HDMI, VGA, BNC & 4in1. Ngokukhishwa okwengeziwe kwe-BNC & 4in1, ukusebenza kwayo okuhlukahlukene kuyokuvumela ukuthi kusebenzele noma yiluphi uhlelo lokusebenza. Ukuqhayisa ngesigidi esingu-16.7 sombala & Ukulungiswa kwe-FHD lokhu kuqapha kuzokwenza ividiyo yakho iphile.
1920 x 1080P Ukulungiswa Okugcwele kwe-HD
I-4in1, i-BNC, i-VGA, okokufaka kwe-HDMI
I-3D Comb-Filter ukunciphisa umsindo wesikrini, i-DE-Iinterlace,
Izipikha ze-Stereo ezakhelwe ngaphakathi ezi-2
I-100mm x 100mm Iphethini Yokumisa ye-VESA
Iwaranti iminyaka emithathu
Kungani Kufanele ukhethe i-Monitor-Grade Monitor?
Abaqaphi bezinga lokuphepha baklanyelwe ukumelana nezidingo eziqinile zezicelo zokubhekwa. Futhi ngokungafani nokuboniswa kwebanga lomthengi okushibhile, ama-monitors ezinga lokuphepha akhelwe-ekugcineni futhi ahlinzeka ngokuthembeka, ikhwalithi yesithombe, nokusebenza okudingekayo ekuqasheni ubusuku nemini.
Le 21.5 Inch Widescreen Security-Grade LED Monitor inikeza ukubukwa okuphezulu futhi yakhelwe ukumelana nezidingo eziqinile zezindawo zokubhekwa ezingama-24/7.
Isibonisi esincane se-LED esinemibala engu-16.7 million senza ividiyo yakho yokubhekwa iphile ngezithombe ezicacile, ezimibalabala. I-anti-glare Monitor ifaka isisombululo sokubonisa esigcwele se-HD x 1920 x 1080 (1080p) esivumela ukuthi ubuke ividiyo yakho yezokuphepha ngokucacile nemininingwane esikrinini sokulungiswa okuphezulu.
Ukuqapha kunikeza i-178 ° evundlile ne-178 ° yokubuka okuqondile mpo kanye ne-16: 9 factor ratio yokubukwa kwesikrini esibanzi.
Ukuqapha kwe-LED yebanga lezokuphepha kukhiqiza ileveli yokukhanya yesithombe eyi-220 cd / m² ngezinga eliphakeme lokubonakala, kanye ne-1,000: isilinganiso sokuqhathanisa esingu-1 sezithombe ezilinganiswe kahle, eziqhathanisa kakhulu.
Ezinye izinto ezithuthukisa umuzwa wakho wokubuka zifaka i-3D comb comb de-interlace feature ehlunga umsindo wesikrini futhi ithuthukise ukulungiswa, kanye nesikhathi esisheshayo sokuphendula esingu-5 ms ukuqinisekisa ukubukwa okushelelayo kwevidiyo ngesikhathi somsebenzi osheshayo esikrinini.
Lokhu kuqapha kufakwe okokufaka okuningi kwesiginali yevidiyo kanye nemiphumela yokuxhuma okuguqukayo. Ungaxhuma kalula i-DVR yakho, i-NVR, i-PC noma ilaptop yakho kumqapha wokubuka ividiyo.
Isibonisi sephaneli eliyisicaba singafakwa ngesitendi esifakiwe, noma sibekwe odongeni ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zakho zohlelo lokusebenza (ukukhweza odongeni kuthengiswa ngokwehlukile). Ukuqapha kufakwe iphethini yokukhweza ye-100 x 100 mm VESA ™ yokufaka isibonisi sephaneli eliyisicaba odongeni. I-VESA ingumndeni wezindinganiso ezichazwe yiVideo Electronics Standards Association yokufaka izibonisi zamaphaneli acabalele nama-TV kuma-stand noma odongeni.
Khombisa No.: PX220WE
Uhlobo lwePhaneli: 21.5 `` LED
Isilinganiselo Sokulinganisa: 16: 9
Ukugqama: 220 cd / m²
Isilinganiselo sokuqhathaniswa: 1000: 1 Static CR
Isikhathi Sokuphendula: 5ms (G2G)
Ukubuka i-Angle: 178º / 178º (CR> 10)
Ukusekelwa Kwemibala: 16.7M
Isixhumi: 4in1 (HD-TVI / HD-CVI / AHD 2.0 / CVBS BNC) Inx1 & Out1,
I-BNC Inx1 & out1, i-VGA Ku-x1, i-HDMI Ku-x1
Ukusetshenziswa kwamandla: 20W ejwayelekile
Yima ngamandla (DPMS): <0.5 W
Uhlobo Amandla: DC 12V 2A
I-Plug & Play: Kusekelwa
Umsindo: 2Wx2 (Uyazikhethela)
Intaba yeVESA: 100x100mm
Isilawuli kude: Yebo
Isesekeli: Isilawuli kude, ikhebuli yesiginali, ibhukwana lomsebenzisi, i-adaptha yamandla
Umbala weKhabhinethi: Mnyama
Langaphambilini Ukuqapha kwe-CCTV PM270WE
Olandelayo: Ukuqapha kwe-CCTV PX240WE
I-Cctv Monitor Nge-Bnc
Abaqaphi be-Hd Cctv
I-4K Plastic Series-WB430UHD
Ukuqapha kwe-CCTV PX240WE
Ukuqapha kwe-CCTV QA240WE
Ukuqapha kwe-CCTV PA270WE
Ukuqapha kwe-CCTV QA270WE